आरजुले के टिपिन् डायरीमा ? यता सभापतिको मुख रातो हुँदै गयो – समावेशी
आरजुले के टिपिन् डायरीमा ? यता सभापतिको मुख रातो हुँदै गयो
बुधबार, माघ १६, २०७५ | २०:१३:११ |
काठमाडौं । माघ १० गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारविरुद्ध थालिने आन्दोलनबारे छलफल हुने एजेण्डा थियो । गगन थापा र डा.रामशरण महतले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने र त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने कोणबाट कुरा उठाएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार अधिनायकवादी शैलीमा गएको र यसविरुद्ध जाइलाग्ने भन्दै १० मिनेटमा आफ्ना सतही कुरा राखेर सबैलाई बोल्ने बाटो खुला गरे । शुरुआतमै चर्किए रामशरण महत । उनले सोधे, ‘अनि वाइडबडीको विषयमा के गर्ने नि ? हामीले बाहिर बोल्दा के भन्ने ? अर्बौं घोटालालाई ठीक भन्ने ? यसमा सभापतिको आधिकारिक भनाइ चाहियो ।’
बैठकका एक सहभागीले भने, ‘रामशरणले हाम्रै मान्छेको नाम नजोडिएको भए यतिखेर यो प्रकरणले सरकार नै जाने स्थिति थियो, कम्युनिष्टको सबैभन्दा ठूलो बदनामी यसैमा पनि हुने थियो, सबैभन्दा शक्तिशाली मसला हात लागेर पनि आज हाम्रै कारण यत्रो घटनालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा लाजमर्दाे अर्थोक के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ?’
उनी बोल्दै जाँदा यता सभापतिको मुख रातो हुँदै गयो । आरजु राणा बडो चनाखो भएर डायरीमै टिप्दै थिइन् । त्यहीबेला नुवाकोटबाट एउटै पार्टीको दुई विरोधीका रूपमा परिचित अर्जुननरसिंह केसीले समेत यही कुरा उठाए । उनले अघिल्ला वक्ताले भनेको कुरामा मेरो पूरै सहमति छ भनिदिए ।
यसअघि लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिका राजन केसीलाई पनि डा. महतले वास्तविकता जे हो त्यस्तै प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिएको कांग्रेसीजन बताउँछन् । केसी र डा.महत आफन्त हुन् । छानबिन क्रममा तत्कालीन देउवा सरकारका पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको पनि नाम आएको थियो ।